Usbrip: akụrụngwa maka nyochaa ngwaọrụ USB | Site na Linux
Mgbe ọ bụ onye nchịkwa usoro na-adịkarị n'ime lihe kachasị arụ ọrụ kwa ụbọchị ha na-arụkarị (na mgbakwunye na ịmepụta na ịgbake okwuntughe email), enwere mmezi na nlekọta nke akụrụngwa.
N'ebe ọ bụla, iji zere ọtụtụ nsogbu, arụmọrụ nke akụrụngwa n'ihe gbasara ntinye ngwa na-ejedebe ma na mgbakwunye na ịme ụfọdụ mgbochi n'ime netwọkụ azụmahịa. N'ime ọrụ ndị a, ọtụtụ na-eleda ndị ọrụ anya onye na-eji akụrụngwa ahụ, naanị site n'ịrụcha mmachi.
Ole na ole n'ime ndị nchịkwa nke usoro ndị na-ahụ maka kọmputa Linux iji chịkọta kernel ahụ n'onwe ha inwe ike ime mgbochi, nke na-agafere ọdụ ụgbọ USB.
Nke a bụ ebe nnukwu ngwá ọrụ na-abata. na achọtara m na ntanetị. Aha ya bụ Nbanye, nke n'okwu nke onye kere ya
"Ọ bụ ihe a na-ahụ anya maka nyocha ihu ọha yana CLI interface nke na - enyere gị aka ịdebe ihe arụ ọrụ USB (yabụ akụkọ ihe mere eme USB) na igwe Linux"
USBRip na-enye gị ohere ịlele n'ụzọ doro anya ngwa ngwa site na inyocha ihe ndekọ Linux. Edere sọftụwia a nke edere na Python 3 dị ọcha (n'iji ụfọdụ modulu dị na mpụga) nke na-enyocha Linux log files ( / var / log / syslog * na / var / log / ozi * dabere na nkesa) iji wuo tebụl akụkọ ihe mere eme nke USB.
N'ime ozi ị nyere, na-egosipụta ihe ndị a: Datebọchị na oge nbanye, onye ọrụ, njirimara onye na-eweta, NJ ngwaahịa, onye nrụpụta, nọmba akara, ọdụ ụgbọ mmiri na ụbọchị na oge nke apụ.
Na mgbakwunye, ị nwekwara ike:
Mbupụ ozi anakọtara dị ka mkpofu JSON (ma mepee ụdị mkpọtụ ahụ, n'ezie);
mepụta ndepụta nke ngwaọrụ USB akwadoro (tụkwasịrị obi) dị ka JSON (kpọọ ya auth.json).
Chọọ maka “mmebi iwu” nke dabere na auth.json: gosi (ma ọ bụ mepụta ihe ọzọ na JSON) ngwaọrụ USB ndị na-apụta n’akụkọ ihe mere eme apụtaghị na auth.json.
Mgbe arụnyere na -s * ọ na - emepụta storages ezoro ezo (faịlụ 7zip) iji kwado ma chịkọta ihe omume USB na - akpaghị aka site na iji crontab. Na mgbakwunye na inwe ike ịchọ nkọwa ndị ọzọ gbasara otu ngwaọrụ USB dabere na VID na / ma ọ bụ PID.
1 Etu esi wụnye Usbrip na Linux?
1.1 Ojiji ojiji
Etu esi wụnye Usbrip na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwa ọrụ a, ga-enwerịrị Python 3 na sistemụ gị yana pip (Python's package management system)
Iji wụnye Usbrip naanị mepee ọnụ ma pịnye iwu na ya:
Ugbu a n'otu ụzọ ahụ ha nwere ike ibudata koodu oru ngo ma jiri ngwá ọrụ si ebe ahụ. Iji mee nke a, ha ga-pịnye site na ọnụ:
Ma ha tinye ndekọ na:
Anyị na-edozi ndị ịdabere na:
Iji ngwá ọrụ a emeghị ka ọ dị mfe. Ka ọ were iji hụ akụkọ ihe mere eme anyị na-eme iwu na-eso:
Ebe a ga-egosi ihe ndị ahụ. N'otu ụzọ ahụ, enwere ike ịmechaa ha site na ụbọchị ma ọ bụ ọtụtụ ihe pụrụ iche.
Site na nke a, a ga-egosipụta ihe ọmụma nke ngwaọrụ USB ndị dị na mpụga nke ejikọtara na akụrụngwa n'oge oge site na Ọkt 10 ruo 15.
Na-arụ ọrụ na nzacha. Enwere ụdị nzacha 4 dị: naanị ihe omume USB dị na mpụga (ngwaọrụ ndị nwere ike iwepụ ngwa ngwa -e); site na ụbọchị (-d); site na ubi (-user, -vid, -pid, -product, –manufact, –nelu, -port) na ọnụọgụ nke ntinye dị ka mbupute (-n).
Iji mepụta faịlụ JSON na ihe omume:
Kedu nke ga-ebu ozi na ngwaọrụ 10 mbụ ejikọrọ na October 30, 2019.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu maka iji ngwa ọrụ a ị nwere ike lelee njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Usbrip: akụrụngwa maka nsuso ngwaọrụ USB
Mozilla, Cloudflare na Facebook webatara ndọtị TLS